Nogadraina fa Tsy Nanao Miaramila, Repoblika Dominikanina | Diary 2015
Nogadraina fa tsy nety nanao miaramila
Enrique Glass sy ilay fonja nanagadrana azy nandritra ny tapa-bolana
Tonga teto ny olona vitsivitsy avy any an-tsesitany, tamin’ny 19 Jona 1949, mba hanongam-panjakana. Vetivety dia resin’ny miaramilan’i Trujillo ireo mpanafika ireo. Na izany aza, dia nogadrain’ny fanjakana daholo izay rehetra tsy nety nanao miaramila sy izay rehetra nahiahiny ho fahavalo. Anisan’ireo Vavolombelona voalohany nogadraina i León Glass sy ny rahalahiny roa, dia i Enrique sy Rafael, ary ireo olona sasany niara-niasa tamin’i León.
Hoy i León: “Nosamborin’ny polisy miafina izahay [izaho sy ireo mpiara-miasa tamiko], ary avy eo nalaina am-bavany. Nafahana izahay rehefa avy norahonana. Andro vitsivitsy taorian’izay anefa izahay dia efa voantso hanao raharaha miaramila indray, saingy tsy hoatran’ny teo aloha no natao anay. Nalefa tany am-ponja izahay rehefa tsy nanaiky. Efa nisy Vavolombelona efatra tao, ka rahalahiko iray tam-po amiko ny roa. Nogadraina indray izahay rehefa avy nafahana. Intelo izahay no tratran’izany, ary iray na andro vitsivitsy fotsiny no tsy nigadra dia nosamborina indray. Nigadra fito taona latsaka izahay raha atambatra, ary naharitra dimy taona ilay farany.”
‘Nokapohina tamin’ny tehina sy karavasy ary vodibasy izahay. Tsy nampihontsina anay anefa izany, satria nanome hery anay i Jehovah’
Voasedra foana ireo rahalahy, na andro na alina. Samy nanao ny nataony na ny voafonja na ny mpiambina. Hoy ny lehiben’ny Fonjan’i Ozama, ilay nanagadrana azy ireo voalohany: “Ianareo Vavolombelon’i Jehovah ireo! Teneno aho rehefa lasa vavolombelon’ny Devoly ianareo. Amin’izay ianareo vao avoakako.” Tsy vitan’ny mpanohitra mihitsy anefa ny nampivadika an’ireo rahalahy nanam-pinoana ireo. Hoy i León: ‘Nomen’i Jehovah hery foana izahay, ka afaka niaritra. Hitanay hoe nanampy anay izy na tamin’ny zavatra madinika aza. Nokapohina tamin’ny tehina sy karavasy ary vodibasy izahay. Tsy nampihontsina anay anefa izany, satria nanome hery anay i Jehovah.’
Norarana ny asan’ny Vavolombelon’i Jehovah
Vao mainka nanenjika an’ireo mpivavaka marina ny fahavalon’ny fahamarinana, tany amin’ny tanàna hafa. Mbola nisy 238 ihany anefa ny mpitory nanerana ny Repoblika Dominikanina, tamin’ny Mey 1950, ankoatra ny misionera. Mpisava lalana maharitra ny 21 tamin’ireo.
Gazety iray milaza hoe voaheloka higadra ny rahalahintsika satria tsy nety nanao miaramila
Tamin’izay ny polisy miafina iray no nanoratra tany amin’ny Sekreteram-panjakana, hoe: “Mbola mazoto manao ny asany eran’ity tanàna ity [Ciudad Trujillo] ihany ny mpivavaka ao amin’io sektan’ny Vavolombelon’i Jehovah io.” Hoy izy avy eo: “Mbola tiako hohamafisina ihany fa tokony hodinihina akaiky ny momba an’ireo. Manimba saina mantsy ny asan’izy ireo sy ny fitoriana ataony, ary tena lasibatra amin’izany ny vahoaka madinika.”
Nasain’i J. Hungría, minisitry ny atitany sy ny polisy, nohazavain’ny Rahalahy Brandt an-taratasy ny toerana tanan’ny Vavolombelona momba ny raharaha miaramila sy fananganan-tsaina ary fandoavana hetra. Fanazavana tao amin’ilay boky hoe “Aoka Andriamanitra no ho Fantatra fa Marina” no nampiasainy. Mbola namoaka didy handrarana ny asantsika ihany anefa ny Minisitra Hungría, tamin’ny 21 Jona 1950. Nantsoina tany amin’ny biraony mihitsy ny Rahalahy Brandt mba handre an’ilay didy. Nanontany azy ny Rahalahy Brandt avy eo raha mbola afaka nijanona teto ny misionera. Afaka mijanona, hono, izy ireo raha tsy mandika lalàna, ka tsy miresadresaka ny fivavahany amin’ny olona intsony. *
^ feh. 1 Namoaka lahatsoratra lava be tao amin’ny gazety ny pretra katolika, herinandro maromaro talohan’ny nivoahan’io didy io. Nanameloka antsika izy ireo tamin’izany, sady niampanga antsika ho Kominista.